News - Gịnị bụ triblend ákwà? Gịnị mere o ji ewu ewu nke ukwuu?
Dịka ị nwere ike ịkọworị site na aha triblend, ngwakọta nke uwe elu ahụ bụ nke akwa atọ dị iche iche. Mgbe t-shirt na-adị mgbe niile bụ 100% owu, triblend tees bụ 50% polyester 25% cotton 25% Rayon ma ọ bụ 50% polyester 38% cotton 12% Rayon, nke mere ka ha dị nro. Dadị dị ka uwe elu mara mma nke na-agba ntakịrị ntakịrị ma nwee ike ịgbatịkwu ha. Uwe elu anyị nke triplend mekwara teknụzụ pụrụ iche wee saa ha, hapụ ya ka ọ nwee ahụ iru ala.
Kedụ banyere obibi akwụkwọ na uwe elu atọ?
Ihe a dị iche iche ọ na-agbaghasị eserese eserese na ya? Ọ bụchaghị. E nwere ihe a obere nke agba ọdịiche dị n'etiti triblends na owu Chiefs, ma iche bụ obere. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, triblends na-eme ka atụmatụ dị ntakịrị mma. Nwere ike ile anya na foto anyị ahaziri maka ndị ahịa anyị.
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya: ihe kachasị ịkụda ihe dị egwu, nke atọ. N'okpuru ebe a bụ agba agba agba anyị atọ, agba ihe ndị a dị njikere, moq chọrọ naanị 120pcs / agba.
Uwe T-shirt dị egwu
100% akwa uwe elu
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ụcha agba ọ bụla ọzọ, anyị ga - ete ya dị ka koodu pantone gị chara acha. Maka 50% polyester 25% owu 25% Rayon triblend ihe, ahaziri agba moq bụ 2000pcs / agba. Ọ bụrụ na ịchọghị oke ọnụọgụ, anyị na-atụ aro ka ịhọrọ 50% polyester 38% owu 12% Rayon, moq ga-abụ 500pcs / agba. Ahaziri agba swatch ọrụ nwere ike ịbụ n'efu.
Chọrọ ịmalite azụmaahịa na-ere t-shirts triblend? Gbalịa kpọtụrụ anyị maka otu njirimara akwụkwọ na-akwụghị ụgwọ!